Aniga waxaan iska illoobey My Windows 7 Password! Sideen Dib Ugu Soo Celiyaa?
Waa kuwan dhawr fursadood oo aad ku illowdo isticmaalayaasha Windows 7
Sidaas darteed waxaad illowday eraygaaga Windows 7 ? Hey, way dhacdaa. Waxaan u maleyneynaa in aan sameyno furaha ereyada adag ee adag, markaa way adag tahay in la qiyaaso, laakiin mararka qaarkood waxaan ka dhigaa kuwo aad u adag in aan nafteena illowno.
Kaligaa ma tihid, nagu aamin. Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu ogaanayo dhammaan Windows 7 muhiim ah oo furaha erayga ah kaas oo si toos ah u dhigay maskaxdaada.
Aynu ka wada shaqeyno fikradaha mid ka mid ah, oo ka bilaabma midka ugu fudud:
Isticmaal Windows 7 Password Reset Disk
Waqti xaadirka ah waa waqtiga loo isticmaalo in Windows 7 xawaarida dib u sameyta ee aad abuurtay. Hambalyo si aad u noqoto mid firfircoon!
Fikradahayga, si kastaba ha ahaatee, badankoodu ma heystaan ​​Windows 7 keydka lambarka sirta ah sababtoo ah ma aadan ogeyn mawduucdii jirtay ama aadan waligaa ku fikirin inaad dhab ahaantii iloobi lahayd Windows 7 eraygaaga.
Si kastaba ha noqotee, marka aad la kulanto mid ka mid ah fikradaha kale ee hoos ku xusan, hubi inaad ku soo noqotid xiriirka kor ku xusan oo isla markiiba samee. Tani ma waxaad baranaysaa casharkaaga hadda.
Maamul Maamulaha Isbedelka Your Password for Your Windows
Haddii ay jiraan dad kale oo koontadaada koontadaada ku jira, mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in lagu qoondeeyo heerarka maamulaha . Maaddaama kuwa leh xuquuqda maamulaha ay maamuli karaan lambarka sirta ah ee dhamaan isticmaaleyaasha ee Windows 7, qofkani wuxuu awoodi karaa inuu bedelo lambarkaaga Windows 7 oo aad ka heshid koontadiisa.
Run ahaantii, haddii aad tahay qofka kaliya ee xisaabta ku leh kumbiyuutarka, taas oo ah xaalad aad u badan oo idinka mid ah, markaa khiyaanadaasi maaha inaad ku sameyso wax wanaagsan.
Isku day in aad Tijaabiso Windows 7 Furaha ee aad Diido
Hey, ha is-rogin indhahaaga! Waxaad la yaabi laheyd inta jeer ee uu shaqeynayo. Ka hor intaanan ku boodin hababka soo kabashada nidaamka casriga sare, waxaad noqon lahayd mid caqli gal ah inaad sameyso guessooyinka aqoonta sida waxa aad sameysatay eraygaaga Windows 7.
Maaddaama badankood sirta ah, xitaa kuwa aadka u adag, waxaa badanaa lagu dhiirrigeliyaa meelaha, dadka, iyo waxyaabaha ku jira nolosheena shaqsiyadeed iyo xirfadeed, waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelatid inaad xasuusato xasuustaada adigoo ku dadaalaya wax yar.
Ma isticmaali kartaa Windows 7 eraygaaga sirta ah wax kasta oo la sameeyo:
Cuntada ugu xiisaha badan?
Cinwaanka gurigaaga ama xafiiskaaga?
Lambarka taleefanka ee badanaa laga wacaa?
Wax ka yimi ilmanimadaada?
Nambarka aad u jeceshahay ama nambarka tirada?
Magaca saaxiib, xubnaha qoyska, ama xayawaanka?
Qofka la jecel yahay ee dhalashadiisa?
Meelo dugsi ama magac?
Isku dar ah mid ka mid ah kor ku xusan?
Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah xusuusashada Windows 7 eraygaaga, fiiri Sida Loo Sheegto Si Xun U Qaadato Password-kaaga .
Dib u cusbooneysii Your Windows 7 Password leh Trick this
U aamuso ama ma'ahan, waxaa jira hab lagu xoqdo eraygaaga Windows 7 oo aan waxba ahayn laakiin qalabyada iyo barnaamijka aad horey u haysatey. Tani waa foolxumo yar oo yar oo qof walba ka qaadi karo. Waxa ugu xun ee aad sameyn doonto waa boot ka yimaada disc ama flash drive oo isticmaal Isticmaal Soonaad dhowr jeer.
Eeg sida loo Isticmaalayo Windows 7 Password si aad u dhamaystirto tababarka.
Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in aadan u malaynaynin in aadan haysanin kumbuyuutar ama kumbuyuutarka labaad ee kombiyuutarkaaga, waxaad u maleyneysaa in aad horayba u haysato madax xanuun isku dayaya inaad xasuusato waxa aad ku qorto eraygaaga sirta ah, khiyaalkan ayaa noqon doona xalka badi .
Hack Hack Xisaabtaada Xisaab Furan Barnaamijka Recovery Password
Haddii aad isku dayday inaad guurtid, ma jiraan dad kale oo isticmaala kombuyuutarka, ugu dambeyntii ma aysan shaqeynin sababo kale, waxaadna hubinaysaa inaadan haysanin Windows 7 xawaarida dib-u-dejinta, markaa waa waqti isku day wax yar oo ka adag.
Barnaamijyada bogsashada kumbuyuutarka ee Windows waa qalabka software loogu talagalay inuu soo kabsado ama dib u dejiyo / tirtiro Windows 7 koodhka. Waxay mararka qaarkood ku adkaan karaan inay isticmaalaan, laakiin haddii aad si dhab ah u iloobtay eraygaaga Windows 7 oo aad sidoo kale raaci kartaa tilmaamaha fudud, waxaa jira fursad aad u fiican oo mid ka mid ah barnaamijyadani kuugu soo laaban doonaa Windows.
Weli Hag & # 39; raadso Windows 7 Password?
Haddii aad isku dayday wax kasta oo kor ku xusan, iyo in lumay Windows 7 koodhku run ahaantii lumo si fiican, ka dibna waxaad u baahan doontaa inaad sameysid nadiif nadiif ah ee Windows 7 , nidaam kaas oo wax walba ka saari doona kombiyuutarka.
Waa wax culus, oo si cad u jajaban, talaabo, laakiin haddii aad rabto kombuyuutarkaada, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso doorashadan haddii wax kasta oo kale ay ku fashilmeen.
Sida loo Xakameynayo Xaaladaha & Arrimaha Kale Marka Lagu Hirgelinayo Windows
Waxa la sameeyo marka Windows Update uu soo galo ama la qaboojiyo
Sida loo Xallinayo Xeerasha Beep
I caawi! My Email ayaa ahaa Hacked!
Xeerka Beekhaaminta ee PhoenixBIOS
Sida loo Xallinayo Khalad URL ah
Sidee loo saxaa Kombiyuutarka oo isku rogi kara, laakiin ma muujinayo wax
Sida loo Xalliyo Khaladaadka inta lagu jiro Hannaanka Hirgelinta Kumbuyuutarka
Sida loo Aqoonsado Mudnaanta Shirkadda DSLR
Raadi oo tirtir faylasha Duplicate Files ee iTunes 11
Diiwaanka qoraallada BlackBerry Voice: Siyaabaha Cusub ee Loogu Isticmaalayo
Dib-u-eegid: Horumarinta Swann Micro RC Helicopter
Sida Loo Helo Cinwaanka Nambarka Computer
Magnavox Odyssey - Isku-xirka koowaad ee ciyaaraha ciyaaraha
Tixraacyada Guud ee Foomamka Excel
Ku darista dhawaaqyada bilaabista macmalkaaga
MacBook Pro oo la socda Touch Bar iyo Touch ID
Tusaale ahaan Isticmaalka Taliyuhu
Sida Loo Hubiyo Koontadaada Gmail ee Gaaban Gaaban
Waa maxay Barnaamijka Daabacaadda Desktop?
Sida loo Dhigayo DVD-yada iyo CD-Roms isticmaalka Ubuntu
7da WiFi ee ugu Fiican ee lagu iibsado sannadka 2018
Qeybta: Mashruuca Mac-ka-Dhaafka Mac
Cimilada Xilliga: Tom's Mac Software Pick
OWC Mercury Accelsior E2: Dib-u-eegis
Ku Badbaadi Macluumaadka iTunes Iyada oo 'Xulista My Album'
OS X Mountain Lion Nadiifi Kumbuyuutarka aan Awood lahayn
Maxay Tilmaameedka 4K? Guudmarka iyo Qiyaasta Ultra HD
Dib u eegista GIMP